Nceda ukhethe ivenkile yewebhu efanele imeko yakho. -I-GBL yaseYurophu BV
ikhayaNceda ukhethe ivenkile yewebhu efanele imeko yakho.
Mthengi othandekayo, nceda ukhethe ukuba ufuna uku-odola ngaphakathi kwi-European Union okanye kwihlabathi liphela. Ngaphakathi kwi-European Union sithengisa i-GBL kuphela kumashishini abhalisiweyo. Kubathengi abafuna ukuthenga iMulti Gel Remover® yale venkile. Le mveliso isandula ukwenziwa sinokuyithengisa ngaphandle kwezithintelo kwihlabathi liphela. Onke amashishini: Nceda ubhalise kwaye isebe lethu lokuthobela liya kukhokela kwinkqubo yokuvula. Izibonelelo zokuba ngumthengi obhalisiweyo kwishishini ngamaxabiso angcono, ukufikelela kwizibalo ezininzi kunye nokufumana iodolo nge-0% yeVAT.
AbaThengi beShishini ababhalisiweyo- Wonke umhlaba
Abathengi abavela ngaphandle kwe-European Union
Ivenkile enkulu yeGlass Remover® -Lizwe liphela